Some Firefox Addon | ZAYYA
← Drupal! Drupal! Drupal!
Memoir to Ramanujan →
Some Firefox Addon
1. FireFox ပေါ်မှာတင် Gmail,Facebook,Twitter အကောင့်တွေ တစ်ခုမက Login ဝင်မယ်။
Firefox extension CookiePie က Firefox ရဲ့ cookies တွေကို ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ အဓိကက ခင်ဗျား Login ဝင်တဲ့ ဆိုဒ်ရဲ့ Text bits တွေကို ကွပ်ကဲပေးတာ။ ဒါကြောင့်လဲ ဒီကောင်ကို သုံးရင် ဆိုဒ်တစ်ခုထဲမှာ အကောင့်အမျိုးမျိုးတစ်ပြိုင်တည်း ဝင်နိုင်တာ ဖြစ်မယ်။ 😛
ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာတော့ လုံးဝမသိသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောမယ်။:D
CookiePie Firefox Extension ကို Install လုပ်ပေးပါ။
new tab တစ်ခု ဖန်တီးလိုက်ပါ။
tab မှာ context menu ဖွင့်လိုက်ပါ။ ( ဆိုလိုတာက အဲ့ tab ပေါ်မှာ Right click ထောက်ပါ ) ပြီးရင် “Toggle On/Off CookiePie” ကို ရွေးပေးပါ။
A cookiepie icon လေးတစ်ခု အဲ့ tab ပေါ်မှာ ပေါ်လာပါမယ်။
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ site (e.g.: http://www.gmail.com) ကို သွားပါ ။ login ဝင်လိုက်ပါ။
အခြား tab တစ်ခုလုပ်။
စောနက အတိုင်း CookiePie လေး ပြန်ဖွင့်။ _ အဲ့မှာ ဒီဆိုဒ်ကိုပဲ နောက်အကောင့်တစ်ကောင့်နဲ့ ပြန်ဝင်လို့ ရနိုင်ပါပြီ။
2. Rapidshare, Megaupload, zShare, Mediafire တွေမှာ ဒေါင်းလုပ်ကြာချိန် ကျော်ပလိုက်မယ်။
Rapidshare, Megaupload, zShare, Mediafire တို့လို ဖိုင်နဲ့ မီဒီယာ ရှယ်ရင်းဆိုဒ်တွေမှာ ဖိုင်တွေ ဒေါင်းကြမယ့်သူတွေအတွက် SkipScreen ဆိုတဲ့ Firefox addon က အသုံးဝင်မယ်။ ခင်ဗျားဒေါင်းလုပ်ချနေတဲ့ အဲ့ဆိုဒ်တစ်ဆိုဒ်ဆိုဒ်ရဲ့ pages ကို SkipScreen က monitoring လုပ်ပေးတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ။
ညီတစ်ယောက်တောင်းဆိုလို့ တင်လိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူး
Filed under Techno Tagged with addon, firefox, tools